Burrell Taps Ny ekipan'ny Colonie hanangana ny fantsona vaovao an'i Xfinity, 'Black Experience' | NAB Show News | 2021 NAB Asehoy ny mpiara-miasa amin'ny haino aman-jery sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. Vaovao momba ny haino aman-jery
Home » Vaovao » Burrell Taps Ny ekipan'ny Colonie hanangana ny fantsona vaovao an'i Xfinity, 'Black Experience'
'Black Experience on Xfinity'
Burrell Taps Ny ekipan'ny Colonie hanangana ny fantsona vaovao an'i Xfinity, 'Black Experience'
Serasera Burrell niverina tato ho ato The Colonie, manindry ny talenta an'ny tonian-dahatsoratr'i Graham Chapman sy ny ekipa mpamorona ny orinasam-pananganana ao Chicago ho an'ny fanombohana sehatra marobe 'Black Experience on Xfinity' (BEOX). Ny fonosan'ny toerana fampielezam-peo sy haino aman-jery sosialy dia manolotra fitambarana horonantsary voalohany, karazana fandaharana amin'ny fahitalavitra, ary kolontsaina Mainty mankalaza kokoa.
Ny fanentanana dia miainga amin'ny fijerin'ny sonia Xfinity miaraka amin'ny fanolorana ny 'BEOX,' ny fanampim-baovao farany amin'ny tsipika fahitalavitra streaming TV, miaraka amina paleta miloko vaovao sy ny fitsaboana endrika. Burrell dia nitondra an'i The Colonie tao anaty sambo raha vao nekena ilay hevitra. Ny masoivoho dia nanome an'i Chapman, talen'ny famoronana Jennifer Moody, ary ny ekipa mandrafitra ny fahalalahana mamorona hamorona ny fampielezan-kevitra miorina amin'ny fahitana ny maso ivoho sy Xfinity.
Ity sombin-javatra ity, indrindra indrindra, dia nanolotra fanamby mahaliana an'i The Colonie: Ampio hamorona fijery vaovao vaovao ho an'ny 'Black Experience on Xfinity' sady mitazona hatsarana famolavolana iraisana mifandraika amin'ny endriny miaraka amin'ny marika.
Chapman dia iray amin'ireo mpanonta-editan'i Burrell ho an'ny Xfinity hatramin'ny niasany tamin'ny tetikasany voalohany ho azy ireo tamin'ny taon-dasa. Nandray anjara tamin'ny famoronana sy famoahana fampielezan-kevitra efatra ho an'ny Xfinity tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa izay dia nanome fahatakarana lalina momba ilay foto-kevitra tao ambadiky ny maha-izy azy ny maso, mba hahafahany mamorona varotra ho an'ny 'BEOX' izay mifanaraka amin'ny tontolo Xfinity.
Tahaka ireo tetikasa Xfinity izay niasàny taloha, i Chapman dia namorona ireo toerana natosiky ny sary ho an'ny 'BEOX' avy amin'ireo singa famolavolana namboarina manodidina ny fifangaroan'ny sary avy amin'ny sarimihetsika mandeha amin'ny fantsona. Ny masoivoho dia niantehitra tamin'ny tonian-dahatsoratra hanenomana ny sary, ny sary avy amin'ny sarimihetsika, ny feon-kira ary ny lalan'ny mozika ho lasa tantara mifangaro mifamaly izay nanatsara ny fiantraikan'ny singa tsirairay.
"Ny ekipa mpamolavola dia tafiditra hatramin'ny niandohan'ny asa," hoy i Chapman. "Ny fandehanana amin'ny seho Zoom dia nahafahanay niara-niasa tamim-pilaminana tao an-trano niaraka tamin'ny fahazoana miditra amin'ny ekipa iray miasa ambanin'ny tafo iray ihany."
Raha nametraka ny fotoana sy ny fotoana ary ny fomba ankapobeny i Chapman dia anjaran'ny mpamorona ny mitondra ny toerana ho amin'ny fiainana. Moody nanara-maso ireo mpamorona sary Motion Graphics Lindsey Fisher sy Jeff Borowiak rehefa namorona karazan-kalafaody notakian'ny toerana izy ireo. Ny fanentanana dia novaina tao amin'ny Adobe Premiere, miaraka amina sary namboarina tamin'ny alàlan'ny fampifangaroana fitaovana, ao anatin'izany ny Adobe After Effects sy ny Flame Premium.
"Niara-niasa tamim-pahombiazana i Jeff sy Lindsey tamin'ny famolavolana sy ny famolavolana ny sary ary ny fampidirana ny UI 'BEOX' amin'ireo vokatra isan-karazany amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny marika Xfinity vaovao," hoy i Moody. "Mandritra izany fotoana izany, ny marika dia nivoatra tamin'ny fotoana tena izy rehefa novolavolaina ny fikarohana."
“Mpimasy i Jen sy ny ekipa! Noraisin'izy ireo ara-bakiteny ny sombin-tsary, ny sary mbola, na ny lokon'ny loko ary nanangana / nanangana ny seho iray manontolo izy ireo, ”hoy ny fanamarihan'ny talen'ny VP Creative Burrell Communication, Terrence Burrell.
Ny ekipan'i Colonie dia niara-niasa tamin'ny talen'ny Associate Creative Associate Winston Chueng sy Terrence Burrell isaky ny dingana. Taorian'ny nahavitan'izy ireo ny fahatapahana henjana dia niditra an-tsehatra tamin'ny fotoana lavitra ry zareo, niara-niasa tamin'i Chapman sy ny mpamolavola, niantoka ny zava-misy ary nifototra tamin'ny foto-kevitr'i Burrell ary nifanena tamin'ny zavatra nandrasan'ny Xfinity. Ny mpamokatra zokiolona Debra Dale dia namarana ny singa ilaina rehetra sy ny fankatoavana araka izay tratra ary nanao izay hahazoana antoka fa maty tsy nisy sakana ny asa.
"Fahafinaretana niara-niasa tamin'i The Colonie izany," hoy i Burrell. “Nandritra ny herintaona lasa izay, i Mary, Graham, Jen, Priscilla ary ny maro hafa dia fanitarana ny maso ivoho. Niaraka taminay izy ireo, nihaona tamin'ny fe-potoana farany hadalanay, nanao fanovana maro, alina be sy vao maraina, nefa tsy diso anjara mihitsy. Ny ekipan'izy ireo dia manolotra vahaolana mamorona ary mandeha ambony sy mihoatra hanatsara ny hevitsika. Nahafinaritra ny asa. ”
“Oh, adinoko ny nanonona, Bob, heveriko fa anarany izany,” hoy i Burrell, nanesoeso an'i Bob Ackerman, mpiara-miasa aminy ary tonian-dahatsoratra zokiolona ao amin'ny The Colonie. ” “Nanampy etsy sy eroa izy. Hey, mety notapahiny mihitsy aza ny toerako voalohany, na angamba io no faharoa. Na izany na tsy izany, tsy maninona izy. ”
“Ny fiaraha-miasa amin'i Burrell amin'ity tetik'asa ity dia traikefa niaraha-niasa lehibe, toy ny mahazatra. Heveriko fa ny iray amin'ireo antony iarahanay miasa tsara dia ny fifandraisana efa natsanganay nandritra ny taona maro sy ny fotoana nomen'ny maso ivoho an'i The Colonie hahazoana fitokisana, ”hoy i Chapman. "Vantany vao nampahafantatra anay ny momba ny 'BEOX' sy ny vokatra tadiavin'izy ireo izahay, dia afaka niasa ny ekipanay - namoaka toerana misy hafatra sy atiny izay miorina amin'ny fananana marika matanjaka an'i Xfinity.”
Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, ho fanampin'ny fampielezan-kevitra 'The Black Experience', niantso ny The Colonie i Burrell mba hanitsy sy hamolavola ny fifangaroan'ny toerana fampitana sy media sosialy ho an'ny Xfinity, ao anatin'izany ny 'HBCU More' sy ny 'Pride is History.
PROJECT: fandefasana ny traikefa mainty ao amin'ny Xfinity Channel
LOHATENY: 'Tonga ny traikefa mainty'
Halavany:: 30,: 15s sy: 06s, tolotra maro sy mari-pamaranana
TYPE: fampielezam-peo fampielezam-peo / fampielezam-peo amin'ny sehatra marobe
AGENSIASA: Burrell Communication / Chicago
Mpanamboatra: Debra Dale
VP / Tale mpamorona: Terrence Burrell
Tale mpamorona mpiara-miasa: Winston Chueng
SOURCE ny FOOTAGE:
Ny atiny an-tsarimihetsika asongadina ao amin'ny BEXX Xfinity
Fikambanana EDITORIAL: The Colonie / Chicago
Mpanonta famoronana Graham Chapman
Mpanonta mpanampy: Priscilla Perez
Famaranana: Tom Dernulc
Mpanamboatra mpanatanteraka: Mary Caddy
ORINASA DESIGN: The Colonie / Chicago
Tale mpamorona: Jennifer Moody
Mpamolavola sary mihetsika: Lindsey Fisher
Mpamorona sary Motion: Jeff Borowiak
Orinasa DESIGN AUDIO + SOUND: CRC / Chicago
Mpangaro, mpamorona feo: Ian Scott
ORINASA MUSIC: Feo Volition
Mpanoratra: Wendell Hanes
loko fanitsiana famolavolana fanovana famaranana Famolavolana sary Motion The Colonie 2021-04-01
Previous: Ilay mpanao sarimihetsika sinema, Alan Jacobsen, dia mampiasa teknika mendrika ho an'ny oniversite Outlier.org
Next: Telestream Mahazo ContentAgent